VB Insight: Vanoongorora uye Vanodhura, Chaiyo-Nyika Mishumo | Martech Zone
Chitatu, December 17, 2014 Chitatu, December 17, 2014 Douglas Karr
Bryant Tutterow mutengesi uyo akatungamira akati wandei makuru emakambani emakambani mune avo marongero ezvekushandisa. Iye anonyanya kuda kusimudzira zvemukati, kusanganisira vezvenhau kushambadzira, uko makambani aakashanda nawo anowana mibairo yakasarudzika kunyangwe izvo vazhinji vaongorori vanga vachitaura. Isu tinofara kwazvo kuzivisa kuti Bryant ari kubatsira DK New Media nekuwedzera kuri kusimudzira kugona, zvakare!
Imwe yemasevhisi atakapa Bryant uye tichiramba tichipa vatengi vedu mutengesi kutsvaga vatengi. Mazhinji makambani haana nguva kana zviwanikwa zvekusarudza mhinduro yakakodzera muindasitiri yekushambadzira tekinoroji. Uye kugadzira matanhatu kana manomwe manhamba ekudyara mukumisikidza, kubatanidza uye kushandiswa kwepuratifomu yakashata inogona kudhurira kambani mamirioni… kana zvakatonyanya ... kuvauraya nenzara nekushaikwa kwekuwana uye yekuchengetedza manhamba.
Chichemo chaBryant muindastiri ndechekuti vaongorori havawanzo kubatika uye nhepfenyuro dzavo dzinodhura zvakanyanya kururamisa mari yacho. Case in point is a recent report that said Mabhiza ari Kutambisa Mari paFacebook ne Twitter - mushumo we $ 499 unobva kuForrester uyo unoburitsa zano rese rakashandiswa naBryant kubudirira kuwedzera kudiwa uye purofiti kumakambani aanoshandira kuvaka hukama munharaunda paIndaneti.
Bryant ikozvino ine mhinduro mukati VB Insight!
Kuzivisa VB Insight
Kubudikidza nehukama hwakakura ne Ian Cleary, takabatana naStewart Rogers kuVentureBeat. Stewart Rogers ndiMutungamiriri, Kushambadzira Technology kuVB Insight, chigadzirwa cheVentureBeat, zvichibatsira kuburitsa ongororo pane rese martech indasitiri pamwe nekushanda nevanyori vari kushandisa chikuva kuendesa zvidzidzo zvavo nemishumo. VB Insight inoshamisa uye inodhura muunganidzwa weiye chaiwo-epasirese indasitiri mishumo, yakanyorwa nevanyanzvi chaivo vachishandisa VB yakazara network yekutsvagisa kwekutanga.
Stewart akandikokawo kuti ndive muongorori! Ini ndatanga kunyora yedu yekutanga Analyst mushumo we VB Insight pamamiriro ekutsvagisa injini yekutsvagisa, yakanyorerwa vatengesi vekushambadzira emakambani emakambani. Tinovimba kuti ichave yapera kutanga kwaNdira!
Tenga Ripoti Rako Rekutanga re50% Kubva!
Stewart anga achangonyorawo mushumo unoshamisa pamusoro pesimba renhau rezvemagariro pamwe nekushandirwa kwevatengi nezvimwe zvimiro zvinotyisa pahuwandu hwevanhu vanogunun'una online pamwe nekuti mabrugwa ari kutora mukana sei pasocial media kugadzirisa basa revatengi pavanenge vachitengesa zvigadzirwa zvavo zvinobudirira:
Dhijitari pitchforks: Kuchinja magariro enhau kuve maricho anokunda.
Martech Zone vaverengi vanogona kudzvanya pamufananidzo uri pazasi kuti utenge mushumo we50% kubva pamutengo wenyaya!
[su_button url = "http://bit.ly/audpcs50 ″ target =" blank "color =" # ffffff "] Tenga Chirevo che50% Off! [/ su_button]
Tags: analystmuongorori anoshumabryant tutterowforresterian yakajekastewart rogersvbventurebeat
Ndeapi akanakisa Ekushambadzira Mapuratifomu?